सरकारले सकेन, विराटनगरको तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा सहकारीलाई !
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचारसरकारले सकेन, विराटनगरको तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा सहकारीलाई !
विराटनगर, ७ मंसिर । विराटनगरसँगै जोडिएको कटहरी गाउँपालिका–१ मा निर्माण भएको तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा सहकारीलाई दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले बजार सञ्चालन गर्न नसकेपछि सहकारीलाई जिम्मा दिने अन्तिम तयारी भएको हो ।
बजार सञ्चालनका लागि जिम्मा दिन विशिष्टीकृत सहकारी संघ छनोट भइसकेको छ । सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्घाटन भएको २१ महिनासम्म बजार सञ्चालन गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विशिष्टीकृत सहकारी छनोट गरेको हो ।
२०७५ चैत ३ गते आधुनिक तरकारी तथा फलफूल बजारको चाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । लगत्तै सञ्चालन गर्ने बताएको प्रदेश सरकारले २१ महिनासम्म बजार सञ्चालन गर्न सकेन ।
बजार सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बोलपत्र आह्वान गरेपनि व्यावसायीले प्रस्ताव भरेनन् । २०७७ साउन २६ गते विशिष्टीकृत सहकारीलाई जिम्मा दिने भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
बोलपत्र प्रकाशित भएपछि विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघ कटहरी १ ले मात्र प्रस्ताव भर्‍यो । सो सहकारी संघ छनोट पनि भएको छ । तर बजार सञ्चालनमा स्थानीयले भूमिका खोजेपछि बजार सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
विराटनगर गुद्रीका व्यापारीलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको थियो । तर बजारमा व्यापारी जान मानेनन् । विराटनगर गुद्रीका व्यापारीले बजारलाई बसपार्क छेउमा रहेको निजी जमिनमा सारेका छन् । कहटरी गाउँपालिकामा रहेको ५ बिगाहा २ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको बजारको संरचना प्रयोगविहीन छ ।
आधुनिक तरकारी तथा फलफूल बजारमा खुद्रा तथा थोक बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, क्लिनिक, बैंक, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । तर प्रयोग नहुँदा भवन निर्माण गरिएको क्षेत्रमा झार उम्रिएको छ ।
प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत पशुपति पोखरेलले सहकारीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार बजार सञ्चालनका लागि कार्यविधि पास भएपछि सहकारीसँग सम्झौता हुनेछ ।
सहकारीले बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदा स्थानीयले सहभागिता खोजेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि परिमार्जन भएपछि बजार सञ्चालनको बाटो खुल्छ,’ उनले भने, ‘हप्ता–दस दिनमा प्रस्ताव क्याबिनेटमा जानेछ ।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन व्यबसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको ४ विघा २ कठ्ठा २ धुर र १८ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा भवन निर्माण गरेको थियो ।
सहकारी असारमा दर्ता, साउनमा विज्ञापन
तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने तयारीमा रहेको सहकारी संघ गत असारमा दर्ता भएको हो । लकडाउनको समयमा किसानको बारीमा तरकारी सड्न थालेपछि जिल्ला सहकारी संघ मोरङको अगुवाईमा तरकारी बजारमार्फत कृषि उत्पादन बिक्री गरेको थियो । तरकारी बजारको संरचना प्रयोगविहीन भएपछि सहकारी सञ्चालकहरुले बजार सञ्चालन गर्ने भन्दै ९ असार २०७७ मा विशिष्टीकृत सहकारी दर्ता गरेका थिए ।
प्रदेश सहकारी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको सहकारीको दर्ता नम्बर २ छ । सहकारी दर्ता भएको एक महिनापछि मन्त्रालयले विशिष्टीकृत सहकारीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । विज्ञापनमा एउटा मात्रै सहकारी संघले प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष तथा विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघका सल्लाहकार डिल्ली पोखरेलले कृषकले उत्पादन गरेको सामाग्री सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनका लागि बजार सञ्चालनको तयारी गरिएको बताए ।
उनका अनुसार संघमा विभिन्न जिल्लाका सहकारी आवद्ध भएका छन् । सहकारीमार्फत गाउँ गाउँमा संकलन भएका सामाग्रीलाई सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने उनले बताए ।